Gipsy Vanner, soavaly mora zaka indrindra amin'ny ankizy | Soavaly Noti
El soavaly gipsy vanner Izy io dia niandoha tao amin'ny vondrona gypsies izay nanangana io karazana soavaly io tamin'ny voalohany ho an'ny lalana antsoina hoe Vardos. Ankehitriny dia soavaly izay fampiasa matetika dia akanjo toy ny biby mora tohina ho an'ny ankizy.
Ny Gipsy Vanner dia nohafarana avy tany Etazonia tamin'ny taona 1966. Na teo aza izany dia tamin'ny 2004 vao noheverina ho karazany izy io ary voasoratra ao amin'ny Fandaharana Federasiona Dressage All Breeds Program. Soavaly iray izay fampiasa matetika dia ny akanjo, equestrianism ankapobeny ary ny asa.
Hita ho karazana soavaly tena manintona izy, manana endrika matanjaka sy dingana matoky na aiza na aiza alehany. Misaotra ny toetra ambany sy fahaizana miovaova io dia afaka namboarina tamina tanjona maro nanerana an'i Eropa manontolo.
Afaka mahatratra mirefy 1,63 metatra ny halavany, nisy aza tranga 1,65 metatra. Na izany aza, 630-635 kg eo ho eo ny lanjany, miankina amin'ny karazana sakafo sy hetsika ataony. Ny volony dia ekena amin'ny hatsarana lehibe asehony amin'ny loko mainty sy fotsy, izay iray amin'ireo santionany mahafinaritra indrindra eto an-tany.
Mikasika ny toetra mampiavaka azy, ny Gipsy Vanner dia karazana equine izay manana tratra malalaka ary avaratra boribory miaraka amina lamosina fohy angamba. Ny fiarovan-dohan'izy ireo raha vao jerena dia misongadina amin'ny fahalehibiazany sy ny volony manodidina azy ireo. Ny hatony dia matanjaka amin'ny fisehoany ary ny lohany mahia manohana azy. Raha atao indray mipi-maso dia hitantsika fa ny anao mane sy rambo dia lava sy mikoriana, ary amin'io no tsy maintsy ampidirintsika ny volony mahitsy sy landy. Manana soroka matevina sy valahana mavesatra izy.
Mikasika ny toetrany dia mila milaza aho fa farafaharatsiny azo heverina ho antonony izy. Izy io dia iray amin'ireo karazana manan-tsaina indrindra amin'ny fitoviana rehetra, sariaka, tena atletika, matanjaka ary ambonin'izany rehetra izany, soavaly mora zaka, tena ara-tsosialy ary tena mora atao namana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Gipsy Vanner, soavaly mora zaka indrindra ho an'ny ankizy
Mahazo sery koa ilay soavaly